Farmaajo iyo Biixi – Inaan Waxba Laga Qaban Su’aasha Qaranimada Ma Xalbey Moodeyn? | JAMHURIYADDA
Home Siyaasadda Farmaajo iyo Biixi - Inaan Waxba Laga Qaban Su’aasha Qaranimada Ma Xalbey...
Farmaajo iyo Biixi – Inaan Waxba Laga Qaban Su’aasha Qaranimada Ma Xalbey Moodeyn?
Maalmo uun ka dib shirkii 38aad ee hoggaamiyeyaasha dalalka ku bahoobay ururka IGAD, waxaa magaalada Jabuuti booqasho aan la shaacin ujeeddada kulanka ku tegay Muuse Biixi Cabdi Madaxa Somaliland oo ay wehliyaan xubno ka tirsan maamulkiisa. Waxaase la filayaa in Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo Muuse Biixi ka wada hadli doono siyaasadda gobolka iyo dib u heshiinta Soomaaliya.
Gugii dhawaa ayaa wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayay Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo kula kulmeen Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisa magaalada Jabuuti, taas oo loo arkayay inay ahayd fursad wanaagsan oo horey loogu dhaqaaqay. Balse isku daygii ma uusan dhalin mirahii laga filayay.
Wadahadallada cakiran waxaa loo aaneeynayaa mowqifyada labada dhinac oo aad u kala fogaa iyo isku garawsi la’aanta siyaasiyiinta oo malaha ka baqaya cadaadiska siyaasadeed ee gudaha iyo danaha shisheeyaha ee khatarta ku ah dadaallada nabad-dhisidda Soomaaliya. Waxaa dhab ah inaan waxba la qaban inaysan xal aheyn.
Si kastaba ha ahaate, baaqii hoggaamiyeyaasha dalalka IGAD waxuu u muuqdaa raadin waddo horay loogu sii wado wadahadallada. Tan iyo burburkii nidaamkii Siyaad (1991) maamulka Somaliland waxuu dadaal ugu jiray inuu helo aqoonsi caalami ah. Hadafkaas uma suuraggelin ilaa maanta mana aysan ka rajo dhiggin.
Wadaxaajoodkii Soomaaliya iyo Somaliland ee ugu dambeyey ee lagu qabtay Jabuuti waxaa goobjooge ka ahaa Mareykanka iyo Midowga Yurub oo guud ahaan door muhiim ah ku leh dib u soo kabashada Soomaaliya, riixayayna dib u heshiisiinta. Malaha qabanqaabiyeyaasha kulanka waxay ka ilduufeen doorka Bratain (UK) ku leedahay shisheeyaha fidnada ku haya Soomaaliya. Khaladkaas diblomaasi ayay u muuqataa inuu qayb ka yahay burburka fursadda heshiis lagu gaari kari lahaa.
Wax yar kaddib wadahadalladii Jabuuti ee June 2020, ayaa Muuse Biixi tweetterkiisa ku shaaciyay in maamulkiisa xidhiidh diblomaasiyadeed uu la yeeshay Taiwan. Arrintaas waxay walaac hor leh ku kordhisay wadahadalladii rahmanaa. Dalalka Masar iyo Malawi ayaa lagu tuhmayaa inay doonayaan inay xiriir la yeeshaan maamulka.
July 2019, Soomaaliya ayaa dowladda Gini (Guinea) oo faraggelin ku samaysay midnimada Soomaaliya u jartay xidhiidhkii diblomaasiga. Tallaabadaas waxay diginin u ahayd in dalalka kale aysan isku dayin inay ku xadgudbaan qarannimadda Soomaaliya.
Waxay u muuqataa in hoggaanka Somaliland ay ku dawakhsan yihiin qorshe shisheeye oo aan natiijo lahayn. Inta xaaladdu sidaas tahay xalka siyaasadeed wuu adkaan doonaa welina lagama yaabo in mustaqbalka dhow wadahadallo lagu gaaro guul xitaa haddii maamulka Muqdisho isbeddel ku dhaco.
Previous articleCayaaraha Gobollada: Markii Kubbadda Cagta, Eex Hayb iyo Siyaasaddu ay Isku Dhacday
Next articleFrom Bullets to Diplomacy: Securing Peace Between Somalia and Kenya